Cabdi Xaashi oo Muqdisho ka furay Shirwaynaha dib u heshiisiinta Qaranka – Kalfadhi
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi C/llaahi ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay Shirweynaha Qaran ee soo bandhigida iyo xaqiijinta hanaanka dhab-u-heshiisiinta Qaran, waxaana ka qayb galay mas’uuliyiin kale oo katirsan Dowladda Soomaaliya iyo Maamul Goboleedyada.
Sidoo kale Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa kulanka goob joog ka ahaa kulanka iyo Wasiiro kale oo katirsan Xukuumadda Reysal Wasaare Xasan Cali Kheyrre. Madaxdii ka hadashay ayaa dhamaantood qiray in baahi wayn loo qabo dib u heshiisiin Qaran oo laga sameeyo Soomaaliya.
“Waan ku faraxsanahay in shirkaan loo qabto umadda Soomaaliyeed, waxaan rajeynayaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo”, ayuu yiri Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya. “Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada ka qayb galayaa shirkaan in ay ka taliyaan aayaha Soomaaliya iyo sidii la isugu keeni lahaa Umadda Soomaaliyeed” ayuu yiri Cabdi Xaashi C/llaahi Guddoomiyaha Aqalka Sare.
Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay dhib badan ku qabto colaad soo laa-labatay loona baahan yahay in waxkasta oo dalka ka jira iyo wixii dhacayba daawo loo helo shirkaan uu gogal dhig u noqoyo.
“Waad ogtihiin in Umadda Soomaaliyeed ay dhib badan ku qabto colaad beeleed iyo dhibaatooyin kale, waxaan rabnaa in shirkaan aan xal ugu raadinno ama aan ugu yaraan ku jeexno qariiradii xalka loogu helaa”, ayuu yiri Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye.
Shirkaan oo dhowr maalmood socon doono ayaa lagu wadaa in gaba-gabada laga soo saaro War-murtiyeed ka hadlaya waxyaabihii lagu heshiiyay mudadii uu socday Shirka.
Maamulka Boosaso oo ganaaxaya gaadiidka muraayadaha ku leh bacaha madow